မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ဆော်တာတွေကို ကိုင်တွယ်အရေးယူရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်တာတွေအပေါ် လက်ပိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ့ အစဉ်အလာကိုလည်း တိုက်ဖျက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ကြီးမားတဲ့ကပ်ဘေးအဆင့် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိကြောင်း အမေရိကန်အခြေစိုက် PHR ခေါ် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအခြေအနေဟာ ငြိမ်သက်နေပုံရပေမယ့် သင့်တော်လုံလောက်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမရှိတာ၊ ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို မကိုင်တွယ်တာတွေကြောင့် နောက်ထပ်ပဋိပက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်၊ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဘေးမဲ့ပေးထားသလို ဖြစ်နေတာကလည်း ဒီ့ထက်ကြီးမားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ ဆက်လက်ပေါ်ပေါက်အောင် လမ်းခင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီအနေအထားတွေကိုမပြုုပြင်ရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကပ်ဘေးအဆင့် ပဋိပက္ခအကြီးစားကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ PHR အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက မိတ္တီလာမြို့မှာ အစ္စလာမ်ကျမ်းစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေ ၂ဝ ကျော်အပါအဝင် မွတ်စလင်အများအပြား သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ Tomas Ojea Quintana က ဒီအကြမ်းဖက်မှုကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ဟန့်တားရှင်းလင်းဖို့ နှောင့်နှေးနေတာဟာ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ အာဏာပိုင်တွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသနေတယ်လို့ မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ Quintana ရဲ့ မှတ်ချက်ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ PHR လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးတာတွေ၊ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထား နည်းပါးလှပေမယ့် ပဋိပက္ခတွေအတွင်း ကျူးလွန်ပုံပုံစံတွေကိုကြည့်ရင် ရဲဘက်နဲ့စစ်ဘက်ဟာ အမိန့်အတိုင်း လိုက်နာခဲ့ကြတတယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို အပြစ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာ မွတ်ဆလင် အရေအတွက် ပိုများပြီး၊ သူတို့ကို ချမှတ်တဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေကလည်း ပိုပြီးကြီးလေးတယ်လို့ PHR အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး William Davis က ဘန်ကောက်မြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
The meaning of "Physicians for Human Rights" in Burmese ought to be "လူ့အခွင့်အရေး သမားကောင်းများ အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) လူ့အခွင့်အရေး ဆရာဝန်များ အဖွဲ့" (သို့မဟုတ်) “လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဆရာဝန်များအဖွဲ့”။
ဘာသာပြန်ရင် ဒီလိုသာ ဖြစ်သင့်သည်။
နောက်ေုကာင်းရာဇဝင်မသိသူတွေကတော့ မူဆလင်ကို အုကမ်းဖက်သမားလိုပြောတာပါ။ တကယ်တော့ အာရပ် နဲ. တရားမဲ့ အကျင့်ပျက်အရင်းရှင်လက်သစ်ကိုလိုနီဝါဒီ တို.အားပြိုင်မှုကနေ ကိုလိုနီဝါဒီတွေက သူတို.ုကီးစိုးထားတဲ့မီဒီယာ နဲ့ ထွင်လုံးအမျိုးမျိုးနဲ. မူဆလင်အပေါ် လုပ်ုကံဖန်တီးနေတာပါ။
one paper is two page ,but you read only one page, not both pages!! how can you say , only Muslim is terrorist, not you ?
U Thant Zin's comment is correct and good.They have to consider themselves.
Aug 21, 2013 03:31 PM
All Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims. Most of Muslims are aggressive. They are reaping as the sow in Syria, Libya and Egypt. Is there human right?
Aug 21, 2013 02:15 AM